တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ကိုအစာတောင့်စက်ကို သုံး၍ အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်
ကြက်၊, ကသာကြက်သားသို့မဟုတ်ဝက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. ကြက်ဆင်ကဲ့သို့သောအခြားသူများအတွက်သင်ထည့်နိုင်သည်, ဘဲ, ကိုရီးယား, နွား၊ စသည်တို့ကြက်ဘဲထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်မှာအစာဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသင့်လျော်သောအစာကျွေးဖို့ဘယ်လို ,ဒါကကြက်ဘဲမွေးမြူသူကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေမယ် .
ကောက်ရိုးကောက်, ချိုသောအာလူးစပျစ်နွယ်ပင်, မြက်ပင်, ရှိပါတယ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ကောက်ရိုး, စသည်တို့. မွေးမြူရေးအတွက်အစာမကျွေးမီအပိုင်းအစငယ်များကိုဖြတ်တောက်သင့်သည်. တိရစ္ဆာန်များအတွက်ကောက်ရိုးကိုဖြတ်သင့်သည် 2-3 စင်တီမီတာ, ဝက်များအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဖြတ်သင့်သည် 1-2 စင်တီမီတာ, နှင့်ချိုသောအာလူးစပျစ်နွယ်ပင်သို့လုပ်သင့်သည် 1 စင်တီမီတာသို့မဟုတ်ဒီတော့. ယေဘုယျအားဖြင့်, ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်အစာကြေစေရန်ကောင်းသည်.
သီးနှံအတွက်,ဘောဇဉ်, အစာအာဟာရအဖြစ်ချိုသောအာလူးနှင့်ပီလောပီနံတို့ကိုကြိတ်ခွဲ။ အစာခြေခြင်းကိုကျွေးမွေးရန်လိုအပ်သည်. သားဖောက်ခြင်းနှင့်ကြက်၊. ဝက်နှင့်ကျွဲနွားအစာများသည် ၁ မီလီမီတာမှ ၂ မီလီမီတာရှိသောအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပိုမိုကြမ်းတမ်းသောအမှုန်များအဖြစ်ကြေကွဲနိုင်သည်; ကြက်သားအစာကို ti အမှုန့် ti grinded ရပါမည်. မွှေးသောအာလူးနှင့်ပီလောပီနံတို့ကိုအချပ်များခွဲနိုင်သည်.တူကြိတ်စက် ပြီးပြည့်စုံသောကြိတ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မည် ,အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်နိုင်သည် , ထိုကဲ့သို့သောဂျုံအဖြစ်, ပြောင်း, ဆန်, ပဲပုပ်, မြေပဲ, ပြောင်းဆန်သို့မဟုတ်အရိုးကဲ့သို့သောအခြားအစိုင်အခဲပစ္စည်းများ, ခြောက်သွေ့သောအသားနှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ကိုမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရှိသောမျက်နှာပြင်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်
အချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်မှုသည်,silage ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်. အဆိုပါ silage အမျိုးမျိုးသောမြေအောက်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့သည်, ကန်များနှင့် vats.it သည်အက်တမ်အက်စစ်ထုတ်ရန်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေအခြေအနေများကိုစုပ်ယူသည်. ၎င်းသည်အစိမ်းရောင်အစာအာဟာရအတွက်အာဟာရကိုအာမခံပေးနိုင်ပြီးစိမ်းလန်းသောကျက်စားရာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အစာချေဖျက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်. ၎င်းသည်အစိမ်းရောင်အစာအာဟာရရာသီနှင့်ရာသီမပိုသည့်အပြင်ပြတ်လပ်မှုကိုညှိပေးသည်.
သင်ကိုယ်တိုင်အစာကျွေးခြင်းတောင့်အပြောင်းအလဲနဲ့သည် ,ဒါကြောင့်အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်, အစာကျွေးခြင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်. ၎င်းသည်ကျွဲနွားများနှင့်သိုးများအစာကျွေးရန်အတွက်တောင့်တင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းဝက်များအတွက်အစာကျွေးသောတောင့်ကိုလုပ်ဆောင်သည်, ကြက်နှင့်ဘဲစသည်တို့ကို. သငျသညျအားဖြင့် feed ကိုလုံးလေးများအောင်သောအခါ, သငျသညျတိရိစ္ဆာန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်၊. အစာတောင့်ကိုအစာကျွေးခြင်းသည်တိရစ္ဆာန်စားသုံးမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတိရိစ္ဆာန်များကိုဇီဇာကြောင်သောအစားအစာများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်, အစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှုမှအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်. ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်များ၏ကြီးထွားမှုကာလကိုတိုစေနိုင်သည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူပြီးတစ်နှစ်ခွဲသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်.
အသေးစားလယ်သမားများအတွက်,စျေးကွက်အပေါ်ဝယ်ယူ feed ကိုလုံးလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ဒါကြောင့်တစ် ဦး ကိုဝယ်ခြင်းငှါကောင်းတစ် ဦး ရွေးချယ်မှုပါပဲ တောင့်စက်ကိုအစာကျွေးပါ, ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်မဟုတ်ပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်များ၏တိကျသောအခြေအနေများနှင့်အညီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစာကျွေးခြင်းလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်.